बैंकहरु धितोमा घरजग्गा रोज्छन् ! spacekhabar
बैंकहरु धितोमा घरजग्गा रोज्छन् !
स्पेसखबर काठमाडाैं, १८ मंसिर
बैंकले व्यावसायिक कर्जामा घरजग्गालाई अतिरिक्त धितो राख्ने भएकाले घरजग्गाको भाउ घटेमा पनि समस्या नपर्ने बताउँछन्। तर व्यक्तिगत घर, जग्गा खरिद, जग्गा विकासजस्ता क्षेत्रमा भएको लगानी भने जोखिममा रहने बैंकर नै बताउँछन्। तर यस्तो कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणको साढे १३ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गएको असोज मसान्तमा प्रवाह भएको कुल ३० खर्ब ३५ अर्ब कर्जामध्ये २ खर्ब ४६ अर्ब व्यक्तिगत घरकर्जा र १ खर्ब ५७ अर्ब घरजग्गा कर्जामा प्रवाह भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।